ကိုယ် စိတ် နှလုံးသုံးပါး ညီညွတ်ရေးဟာ
စတေးခဲ့သူတွေအတွက် တဘဝလုံးစာနဲ့လဲနိုင်မှ …
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 9:24 PM
ဘ၀နဲ့ရင်းပြီး စတေးခဲ့သူတွေအတွက် လှပတဲ့ အနာဂတ်နဲ့ အေးမြတဲ့ ရောင်ခြည်ကိုတော့ တနေ့မှာ ခံစားရမှာပါ အကို။
ကိုဆောင်းယွန်းလရယ် ဒီလိုပါပဲဗျာ.ညီညွတ်ရေးအိပ်မက် မက်ရင်း ရန်ထဖြစ်နေကြရတုန်းဗျာ.
ရန်မဖြစ်ကြသူတွေခြင်းလည်း ထဲထဲဝင်ဝင် မညီညွတ်နိုင်ကြပြန်ဘူး.
လွတ်လပ်မှုကို ကော်ဖီတခွက်နဲ့ ဒူးနှံသောက်ပြီးစီးကရက်တလိပ် ခါးထောက်ဖွာနိုင်တဲ့ ဘ၀မျိူးမှာ မလွတ်လပ်သူတွေအတွက်လည်း တမနက်စာလောက် စီးကရက်တဗူးစာလောက်တောင် ကျနော်တို့ မညီညွတ်ကြပြန်ဘူးဗျာ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းမသတီပါဘူး.
တယောအိုထိုးနေကြမှာလား…” ဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ။
မစ္ဖျရိယ ဆိုတာဘာကို ဆိုလိုတာလဲ kc2.?
ဟူတ်တယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုအန်ချနေကြတာ အဆိပ်လဲပါရဲ့ သွေးလဲပါရဲ့။ ခရီးရောက်ချင်ရင်တော့ ကဗျာဆရာပြောသလိုပဲ
အကို့ကဗျာထဲက ဆိုလိုချင်တာတွေ အရမ်းကောင်းပါ
အင်အားပြည့်လာတတ်တယ် အစ်ကို ...။။
ပြောချင်တာတွေ နီးစပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောမပြတတ်ဖူး ဖြစ်နေတာတွေ ဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါပဲ။
အင်အားပြည့်ကဗျာ တပုဒ် အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုဆောင်ယွန်း
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်က ကဗျာတွေကို သိပ်မန့်လေ့မရှိဘူး။ အထူးသဖြင့် ကဗျာကောင်းတွေဆို ပိုလို့ မမန့်ရဲဘူး..။
ဒီကဗျာလေးကိုတော့ မရဲတရဲ ၀င်မန့်ပါတယ်။
ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို စကားလုံးထိထိမိမိနဲ့ ဖတ်တဲ့သူရဲ့ ရင်ထဲကို ဆိုလိုချက်ကို အရအမိ ထည့်ပေးနိုင်တယ်။ တစ်ယောက်ခံစားချက်ကို တစ်ယောက်ဆီစီးကူးဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ ကြားခံတစ်ခုကနေဆို ပိုခက်ပါသေးတယ်။ ဒီကဗျာလေးကတော့ ရော့ ဒါငါ့ခံစားချက်ဆိုပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကျေးဇူးပါအစ်ကို။ အစ်ကို့ကဗျာတွေဖတ်တိုင်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ကျန်ခဲ့တာချည်းပဲ
ကလစ်နျစ်ချက်နှိပ်မိလို့ ထပ်သွားတယ်။ ခွင့်လွတ်ပါ။ ဖျက်ပစ်လို့ရပါတယ်။
မယ်ကိုး ရဲ့ စာစုများ
9 Best Highest Paying URL Shortener Sites to Earn Money Online
၈၈ ရဲ့ နော်မန်
တစ်ယောက်တော့ အမြဲ ရှိ တယ်
VACANCIES ( နေရာလွတ်များ )
Best Myanmar Blog 100
Blogged By Kyaw Nyo Thaway.
Blog Archive October (34) November (59) December (23) January (15) February (14) March (10) April (6) May (1) June (1) July (1) August (2) September (8) October (14) November (14) December (9) January (19) February (15) March (19) April (14) May (8) June (8) July (12) August (12) September (11) October (8) November (6) December (3) January (6) February (6) March (3) April (3) May (3) June (1) July (1) August (2) September (2) October (3) November (3) December (2) January (2) April (1) May (1) June (3) July (2) August (2) September (2) October (3) November (1) December (2) January (3) February (2) March (3) April (3) May (1) August (1) September (3) October (2) December (2) January (1) August (1) September (1) November (1) February (3) October (1)